Baahin: Isniin, Mar 28, Weriye Maxamed C. Kooshin ~ Daljir ~ Garowe. Warbixin ku saabsan shir weynaha nabadeed ee haweenka Somaliya oo ka furmay Garowe; Khudbadihii furitaanka shirka ee M/weyne Faroole & madaxda kale … “Puntlnad waa u sharaf-dhac in ajnabi la soo qafaashay madax-furasho loogu haysto dhulkeeda”, taliyaha ciidanka birmadka Puntland, G/lle Dhexe Gantaal … Xil. Axmed Cawad Cashara oo aan ka waraysanay doodihii fadhiga golaha wakiilada Somaliya ee maanta … Afhayeenka wasaarada warfaafinta ee Somaliya oo difaacay sababta loo xiray madaxda idaacada Shabeelle … – Radio Daljir
Baahin: Isniin, Mar 28, Weriye Maxamed C. Kooshin ~ Daljir ~ Garowe. Warbixin ku saabsan shir weynaha nabadeed ee haweenka Somaliya oo ka furmay Garowe; Khudbadihii furitaanka shirka ee M/weyne Faroole & madaxda kale … “Puntlnad waa u sharaf-dhac in ajnabi la soo qafaashay madax-furasho loogu haysto dhulkeeda”, taliyaha ciidanka birmadka Puntland, G/lle Dhexe Gantaal … Xil. Axmed Cawad Cashara oo aan ka waraysanay doodihii fadhiga golaha wakiilada Somaliya ee maanta … Afhayeenka wasaarada warfaafinta ee Somaliya oo difaacay sababta loo xiray madaxda idaacada Shabeelle …
Maarso 28, 2011 12:00 b 0
Baahin: Mar 29, Weriye Axmed Jookar ~ Daljir ~ Bossaso. Muqdisho: Dawlada federaalka ah ee Somaliya oo shahaada sharaf guddoonsiisay ashkhaas dawr ka qaatay siidaynta lammaane British ah oo ay afduub u haysteen dabley Somali ah; M/weyne Shariif oo munaasabadaas kaga hadlay qoraalo foojari ah oo uu sheegay in laga faafiyey dawladiisa … Bossaso: Gen. Yusuf Axmed Khayr, wasiirka amniga ee Puntland oo bahala-galeen ku tilmaamay mid ka mid ah xaafadaha Bossaso; tacsina ka diray dilka nabadoon Axmed Saalax Caynab oo habeen hore lagu dilay Bossaso … Buurtinle: Shacabka Buurtinle oo dhaliilay kaalinka dawlada Puntland ee gurmadka abaaraha, codsanayna gargaar deg deg ah … Buuhoodle: Dawlada Puntland oo gaarsiisay gobolka Cayn raashin mucaawino ah oo dhan 70 ton …
Wada-hadlisiinta siyaasiyiinta Laas-Caanood iyo Buuhoodle.